Unai Emery oo weerar ku qaaday macalinkii hore kooxda Arsenal Arsene Wenger – Gool FM
Unai Emery oo weerar ku qaaday macalinkii hore kooxda Arsenal Arsene Wenger
(Arsenal) 22 Nof 2018.Tababaraha haatan ee kooxda Arsenal Unai Emery ayaa ku dhaleeceeyay Arsene Wenger qaab ciyaareedkiisii Gunners, sababa la xiriira inuu iska indho tiray qorsho difaaceedka, isla markaana uu diirada saaray kaliya dhanka weerarka.
Unai Emery ayaa wareysi uu maanta ku bixiyay wareyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Waayaha Arsene Wenger ee kooxda Arsenal waxay ku raaxeysan jireen qaab ciyaareed ku saleysan weerar, ciyaartoyda waxay ahaayeen kuwo leh feker fiican iyo faham wanaagsan,
“Laakiin mudo kadib xiisaha kooxda ayaa wuxuu noqday weerar oo kaliya iyagoo iska lumiyay doorka difaaca”.
“Waxaan rabo ayaa ah inaan isku darsado labada qorsho ee kala ah daafaca iyo weerarka si aan u noqono koox in badan dagaalami karta, Arsenal dhulka ayay ku dhacday, waa inaan joojinaa oo aan isku dayno inaan kici karno”.
“Waxaan la kulmay Wenger hal mar mana aanan ka hadlin kooxda, waan ixtiraamayaa, laakiin ma xiiseenayo qiimaha uu aniga i siiyay, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan bedelo waxyaabo badan, waxaan u sheegay ciyaartoyda, iyadoo xitaa ay haatan kasoo wareegatay 4 bilood, hadana wali waan u sheegaa inaan bilaw ku jirno”.
Waxaa xusid mudan in Unai Emery uu la wareegay shaqada tababarka kooxda Arsenal dhamaadka xili ciyaareedkii hore, kadib markii uu Wenger ka dhaqaaqay shaqada Gunners kadib mudo dhan 22 sano.
Jose Mourinho oo OOYIN Jabsaday kaddib markii uu ogaaday inuu Khiyaanay Sir Alex Ferguson.....(Sidee wax u dheceen?)